On sept 20, 2018 19 755
Voasambotry ny polisy ireo 05 mianadahy nandray anjara tamin’ny famakiana ny kioska mpampiasa vola sy namono ny mpiambina teo amin’ny bois sacré eto Mahajanga, ny talata 18 septambra alina. Sarona niaraka tamin’izy ireo ny ambim-bola 2 900 000 ariary sy moto anankiroa novidiana tamin’ny vola nangalarina ary puce sy finday.
Ny 15 septambra tokony tamin’ny 7 ora maraina no nisy namaky io kioska fandraisana sy fandefasam-bola eo amin’ny bois sacré io. Lehilahy roa nisaron-tava nitondra fitaovam-piadiana no hitan’ny olona tamin’izany. Nanenjika sy nanohitra azy ireo ny mpiambina iray ka maty notifirin’ireo jiolahy. Nitsoaka tamin’ny moto izy ireo avy eo nitondra ny vola.
Nanokatra fanadihadiana avy hatrany ny polisim-pirenena taorian’ny fanafihana, nifampiresaka tamin’ireo nahita ny zava-nitranga sy ny manodidina. Nisy tamin’ireo nanatri-maso arak’izany nanome loharanom-baovao ny mpitandro filaminana, araka ny fanazavan’ny kaomisera Tabaly Fabio, misahana ny Commissariat central eto Mahajanga. Izay nahafahana nisambotra azy 05 mianadahy. Ny roalahy tamin’izy ireo, ilay nandray anjara mivantana tamin’ny fanafihana teny amin’ny bois sacré ary notazomin’ny mpitory ho tompon’antoka tamin’ny fahavoazana. Ny telo hafa nampiantrano azy ireo. Nandritra ny fanadihadiana ihany koa no nahitana ny ambim-bola sy ny moto ary ireo fitaovana fampiasa ao amin’ny kioska.
Nanamafy ny kaomisera Tabaly Fabio fa noho ny fiaraha-miasan’ny vahoaka, tamin’ny fanomezana loharanom-baovao no nahafahana nisambotra an’ireto jiolahy ireto, sady ahafahana mamongotra ny asa tsy fandriam-pahalemana eto Mahajanga.
MARC RAVALOMANANA : MANAN-DANJA AMIKO NY DINAN’NY FIFAMPIFEHEZANA.